Looks Nepal प्रधानमन्त्रि ओलीको अग्नी परीक्षा – Looks Nepal
कोरोनाको कहरले छटपटिएको नेपाललाई यतिखेर भारतको दादागीरी र चीनको न्यायो सहयोगको लालीपपले चिन्तित बनाएको छ ।भारत नेपाली भुमी लिपुलेकमा सडक खन्ने , चीन मानसरोबरको बिकासका लागी नेपाली भुमीबारे अनबिज्ञता प्रदर्शन गर्ने, चीनीया नागरिक चीनले फिर्ता नगर्ने उल्टै नेपाली भुमीमा अराजकता प्रदर्शन गर्ने गतिबिधीले नेपालीहरुलाई गम्भिर बनाएको छ ।
यी घटनाक्रमले नेपालीहरुलाई कोरोना बिरुद्ध लडने र आफनो भुमिको रक्षा गर्ने दुइटा महत्वपूर्ण कार्यभार सुम्पेको छ ।यसका लागी नेपालीहरुको बलियो एकत पहिलो शर्तका रुपमा उभिएको छ । साथमा दलिय र नीजि स्वार्थबाट माथि उठेर कुटनीतिक बुद्धिमताको खोजी गर्ने दायीत्व पनि बढेको छ ।
बिगतमा भारतले अघोषित रुपमा गरेको नाकाबन्दीका बखत राष्ट्रबादी नेताका रुपमा छबी बनाएका तात्कालिन एमालेका नेता खड्ग प्रसाद ओली यतिखेर पूर्ण बहुमत सहित कार्यकारी प्रधानमन्त्रिका रुपमा छन् । आज फेरी फरक शैलिले नेपालीहरुको मर्ममाथि भारतले प्रहार गरिरहेको छ ।चीन त्यही प्रहारलाई मौन समर्थन गरिरहेको छ । भारतले नेपालको सिमा मिचेर मानसरोबर जाने सडक खनेर उद्घाटन गर्यो भन्ने सुन्दा आम नेपाली जनता नाकाबन्दीको समयकै जस्तो केपी ओली खोजिरहेका छन् । तात्कालिन अबस्थामा राष्ट्र र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा पुरानै चट्टानी अडान जस्तै नेपाली भुमी अक्षुण्ड राख्न उनको अडान खोजरहेका हुन् ।
“ काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भन्ने उखान झैं कोरोनाले बिश्व आक्रान्त पारेका बखत दल फुटाउन अध्यादेश जारी गर्न लगाउने , दुइपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर पनि १८ घण्टा देश र जनताका लागी काम गरेकाले गिनिज बुकमा नाम लेखिनुपर्छ भनेर चर्चामा रहन प्रधानमन्त्रि आफनो भुमीको रक्षार्थ, नेपाली जनताको आत्म सम्मान, सिमाबर्ति क्षेत्रमा रहेका नेपालीको अपमानको रोदनको आँसु पुछ्न के गदैछन् भन्ने जान्न आम नेपालीले चाहेका छन् ।
भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा भारतीय सेनाले नेपाली भुमिमा परेड खेल्दाहोस् वा भारतका सुरक्षाकर्मीले नेपालीहरुलाई सिमाबर्ती क्षेत्रमा गरेको अमानबीय हर्कत होस् वा चुस्ता र कालीपानीमा निरन्तर अतिक्रमणको चपेटा होस् वा नेपालको भुमी समेतलाई कैद गरेर गत नोभेम्बरमा भारतले नयाँ नक्शा जारी गर्दा एउटा बिज्ञप्तीको चिर्केटो सार्बजनिक गर्नुले कतै प्रधानमन्त्रिको राष्ट्रियता पदसँगै कतै भुत्ते भएछ की? भन्ने संशय पनि उत्तिकै उठिरहेको छ ।
यतिखेर पनि नेपाली भुमीमा भारतीय सेना तैनाथ गर्दा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रि एबं राष्ट्रबादी नेता केपी ओली किन मौन हुनुहुन्छ ? सरकारको प्रमुख पार्टीको बिज्ञप्तितीर किन अल्मलिनुभएको छ ? पार्टीको भुमीका कमरेड प्रचण्डलाई दिएर सरकारको कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने होइन र ?भनेर जिज्ञासा समेत ब्यक्त हुन थालेका छन् ।
संसदमा सांसदहरुले सार्बजनिक महत्वको प्रस्ताबमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेपछि केही दिन अघिसम्म आफुहरुलाई लिपुलेकमा सडक बनाएको र उद्घाटन भएको जानकारी नभएको बताउने परराष्ट्र मन्त्रि प्रदिप ज्ञवाली सांसदहरुको प्रश्नको जबाफदिदैं थाहा नहुने त कुरै भएन भनेर भन्दैछन् ।
पराराष्ट्र मन्त्रिले दिएको जानकारी अनुसार उच्च पदस्थ कर्मचारी , राजनैतिक तह र सरकारको तहमा संबाद गर्न खोज्दा भारतले अटेर गरेको प्रष्टै देखिन्छ । यसो हुँदा पनि सरकार कीन बेचैन भयो बुझन सकिएको छैन् । लिपुलेक क्षेत्रमा रक्षामन्त्रिको भ्रमण तिर्थयात्रा थियो की ,सरकारी ? भनेर सांसदले उत्तर चाहियो भन्दा उत्तर समेत दिन वहाँ असमर्थ रहनुले सरकार कोरोनाको उचारलाई ब्यबस्थित बनाउन मात्र होइन राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न समेत कच्चा र कमजोर हुन्छ की भन्ने डर लागेर आएको छ ।
नेकपालाई यो स्थानमा ल्याउन योगदान पुर्याएका के पी ओलीको रष्ट्रियता सक्कली हो की नक्कली हो ? मूल्यांकनको समय आएको छ । कुनै बेला माओबादीका कट्टर आलोचक मानिएका उनी कुनै बेला मित्र राष्ट्र भारतका पक्षपोषक बनेका थिए । असल मित्रको परिचय कठिन घडीमा हुन्छ भने झैं प्रधानमन्त्रि यतिखेर मूल्यांकनको कसीमा परेका छन् । हाम्रो आग्रह छ । भारतको छिमेकी बिरोधी पेलाहा नीतिका बिरुद्ध कुटनैतिक समाधान खोज्न सके सबैभन्दा बढी उपलब्धी प्रधानमन्त्रि के.पी शर्मा ओलीलाई हुन्छ । उनले आफूलाई राष्ट्रबादीको बलियो उदाहरण पुष्टि गर्न सक्नेछन् भने अर्काेतर्फ पार्टीभित्रबाट सत्ता बर्हिगमनको बाटो खन्नेहरुको भुमिका पनि बन्द हुनेछ । त्यतिखेर उनी मात्र होइन नेकपा समेत जनताबीच प्रिय हुनेछ ।अन्यथा भारतिय बिस्तारबादलाई खुशी पार्न नक्कली राष्ट्रबादको खोल ओढेर सत्तारोहणको खेल खेल्न नाकाबन्दीलाई उपयोग गरेको हो भन्ने टिप्पणी प्रमाणीत हुनेछ त्यतिखेर उनलाई नेपाली इतिहासले क्षमा पनि दिने छैन् । त्यसैले सक्कली वा नक्कली कुन रोज्ने भन्ने स्वयं प्रधानमन्त्रिको हातमा छ । त्यसैले यो उनका लागी परीक्षाको घडी हो । के.पी शर्माको सत्ताको किलो हल्लीसकेको तर उखेल्न मात्र बाँकी रहेको बखतमा यो मुद्धा चुनौती मात्र होइन अबसर पनि हो । उनले यसलाई कसरी लिनेछन् । त्यो समयले देखाउनेछ ।
यहाँ एउटा दृष्टान्त पेश गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु । एक जना गुरुले आफना शिष्यहरुलाई लामो मसयसम्म शिक्षा दिएपछि परीक्षा लिएछन् । परीक्षामा सबै बिद्यार्थी उत्तिर्ण पनि भएछन् । तर गुरुले फेरी बिचार गरें ,अब यीनीहरु धर्ममा चाहिं के भएँ यसको पनि परीक्षा लिनुपर्यो भन्ने ठाने । यस्तो कौतुहलता आएपछि गुरुले बाटोमा काँडा ओछ्याएछन् र भनेछन्,बाबु हो तिमीहरु यो बाटो पार गरेर आऊ गोधुली साँझ भइसकेको थियो । गुरुले यस्तो कुरा भनेपछि सबैजना गुरुलाई प्रणाम गरी हिडें । अलिक पर पुगेपछि बाटोमा काँडैकाँडा देखें । पहिलो युवकले भन्यो साथी हो , अब हाम्फाल्नुश्रेष्ठ हुन्छ । ऊसले हाम फालेर बाटो पार गरयो । अर्काे युवकले भनेछ, ल साथीहरु हो ⁄ बाटो लामो छ , हाम फालेर शक्ति खर्च गर्नुभन्दा छेऊबाट जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर काँडालाई त्यत्तिकै छोडेर किनाराबाट बाटो पार गरेछ । तेश्रो युवक चाहिं हतार हतार गरेर बाटाको काँडा पन्छाउन थालेछ ।यस्तो गतिबिधि देखेर बाँकी दुइले भनेछन्, “के गरेको तिमीले यस्तो ? ”
उसले भन्यो— “काँडा पन्छाउन लागेको । ”
बाटो ज्यादै लामो छ , यसरी काँडा पन्छाउँदै जाने हो भने हामीले बाटो पार गर्न सक्छौं र ? फेरी रात पनि पर्न लागीसकयो ? उनीहरुको कुरा सुनेर हाँस्दै तेश्रो युवकले भन्यो ,मित्रहरु त्यसैले त म यसलाई हटाइरहेको छु ,ता की हामी भन्दा पछि आउने बटुवाले दुःख नपाउन । तेश्रो युवकको यस्तो कुरा सुनेर पछाडी लुकेर बसेका गुरु बाहिर आएर भने बाबु तिमी जाऊ ,तीमी धर्मको परीक्षामा पनि पास भयौं । बाँकी दुइलाई चाहिं पुन गुरुकुल आउनु भन्दै गुरु फर्किए ।
त्यसैले सरकार र यसका प्रधानमन्त्रि कथाका दुइ युवकहरु जस्तै हाम फलेर र छेउबाट फुत्कने खोजे जस्तै गर्ने हो की तेश्रो युवकले झै सबै काँडालाई पन्छाएर बाटो सफा गर्ने हो ? समयमा हेक्का पुर्याउनु जरुरी छ ।
जसरी पूर्ब प्रधानमन्त्रि सुशिल कोइरालाले भारतलाई नेपालको सार्बभौमसत्ता र भुमीमाथि हस्तक्षेप नगर्न सन २०१५मा प्रेस नोट पठाए, भारतले नचाहँदा नचाहँदै संबिधान जारी गरेर नेपालीपन देखाएँ । त्यसैगरी प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्रि बि.पी कोइरालाले चीनले सगरमाथा हाम्रो भुमीमा हो भनेर दाबी गर्दा तात्कालिन सरकारसँग जसरी प्रमाण सहित बसेर आफनो भुमी कायम गरे त्यसैगरी बि. सं १८१६ को सुगौली सन्धीको आधारमा नेपाल सरकारले शिघ्र यो समस्याको समधान गरोस् ?नेपालको जमिनको अधिकार नेपालमै कायम गरोस् । जय नेपाल !